Abaphandi bafumanisa izifo iinkomo ezintsha kwaye ziyithintele ukuba ekusasazeni - China Chongqing Fangtong
Abaphandi bafumanisa izifo iinkomo ezintsha kunye nokuthintela ukuba oku ekusasazeni
Emva izifundo genetic amathole gqitha, uphando uyakwazi ubutyhile izifo ezazingaziwa kwafunyanwa phakathi Holstein iinkomo. Lokuzalanisa inkunzi apho ukuguquka ndlela deformation siphuma ngoku sele ubeke phantsi ukuthintela isifo ngculaza ngakumbi.
Phakathi iinkomo Danish ukuzala kwamadlozi enye yenkomo yokuzalela isetyenziselwa ingazalisa ezininzi iinkomo. Ngenxa inseminations ezininzi inkunzi enye Kanjalo uyise amawaka amathole. Ngoko ke, kubalulekile ukuqinisekisa ukuba ngaba zeenkomo ukuzala athwale izifo njengelifa.
Le nto kanye abaphandi kwiYunivesithi yase Copenhagen ukuba nje kwenziwe. Kuphononongo phakathi amathole Holstein olupapashwe kwijenali yenzululwazi BMC Genetics baye bafumana isifo olungachazwanga kude kube phakathi izilwanyana - a deformation yobuso abaye bakhetha kubiza ebusweni Dysplasia Syndrome. Abaphandi baye bafumanisa ukuba kwezakhi leyo unobangela sifo phakathi lamathole afumanisa emva enye yenkomo lokuzala ethile. Inkunzi ngoku ubeke phantsi ukuthintela ezinye iimeko zesi sifo phakathi namathole amatsha-wazalwa.
'Siye safumanisa ukuba enye yenkomo lokuvelisa ukuba iphuhlise yemfuza kwiiseli ze inyama yobudoda-ekhobokisayo, nto leyo ekhokelele ekubeni deformation phakathi amathole. Inkunzi kwakudlula guquko kwi ukuya kwi-0.5 ekhulwini nenzala yayo, apho lithe lalila efana kakhulu. Kodwa lo inkunzi sele wazala amathole ngaphezu kwama 2,000 yaye beze ezinokuba uyise ngakumbi. Zonke amathole likhubazeke wafa okanye kwafuneka kutshatyalaliswa kuba va xaniseka. Ngoko ke, kubalulekile ukufumana unobangela ', utsho uNjingalwazi uJørgen Agerholm evela kwiSebe of Sciences Veterinary Clinical.
Emva kokuba wafumana inkcaze- bezilwanyana amathole kunye deformations ebusweni, uJørgen Agerholm waya kufuna ukuba amatyala ngakumbi womnatha yakhe bezilwanyana iinkomo, kuquka on Facebook. Emva koko wafumana amathole ngaphezulu ezibekelwe ukubhala iimviwo.
DNA evela amathole likhubazeke yathotyelwa kwizifundo yemfuza, kwaye apha abaphandi wachaza ingxenye iyonke zofuzo linegama ukuguquka ayifumaneki kwi Holstein DNA eqhelekileyo. Oku kwenzeka ngenxa yokuba amade ngokucokisekileyo lwangaphambili Holstein DNA eqhelekileyo.
Abaphandi ke bafunda ukuba deformations yobuso efanayo afumaneka phakathi kwabantu, kwaye ezi zibangelwa ukuguquka kule inxalenye enye zofuzo, ngakumbi FGFR2 sofuzo phakathi kwiintsana ezisandula ukuzalwa. Le gene ke ezilandelelaniswa ngayo genome namathole ', yaye abaphandi babe nako ukubona ukuba kuguquka kule gene yayiwenze sifo phakathi amathole. Ngaloo ndlela sifo yabantu wanceda abaphandi lwenkqubo yokwalatha wezakhi sofuzo.
Abaphandi ziviwa DNA evela kubazali lamathole 'kunye nabantwana ndaza ndafumanisa ukuba lo guquko nayo kugcwele apha. Oku kuthetha ukuba amathole yaqulunqa deformation xa ukuguquka kwadluliselwa esuka nokuba ngunina okanye nguyise, hayi evela bobabini unina noyise, leyo kunjalo kunye nezifo ezininzi njengelifa.
'Injongo yethu kwakusoloko ukuthoba inani lamathole abagulayo nabafileyo, njengoko ibuhlungu kakhulu kwaye kungqubana ezinye izifo njengelifa. Kulo mzekelo amehlo wawuxhoma phantsi kubathetheli namathole, kwaye deformations yobuso wabangela ukuba babe neengxaki kakhulu uphefumlayo. Asinto Kunzima ukuba nomfanekiso intlungu oku. Iziphumo zophando ezinjengezi kuya kusinceda-ntle yezilwanyana ngokuthi ngokunciphisa ukusasazeka kwezifo ezifana. Yaye ke kwakhona kuphucula imeko yezemali abanini iinkomo, abakwaziyo ukunciphisa iilahleko ', ucacisa uJørgen Agerholm, ngubani na naye iNtloko yeCandelo for Veterinary Veliswa kunye Obstetrics.
* Prince: Nceda ukhethe Cup